६० वर्षे उड्डयन इतिहासमा पहिलो पटक बेलायत,जर्मनी र क्यानाडा उड्दै नेपाल एयरलाइन्स ! – " सुलभ खबर "
६० वर्षे उड्डयन इतिहासमा पहिलो पटक बेलायत,जर्मनी र क्यानाडा उड्दै नेपाल एयरलाइन्स !
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइडबडी जहाजले बेलायत, जर्मनी र क्यानाडामा चार्टर्ड उडान गर्ने भएको छ । विपद्को उडान सारथी बनिरहेको निगमको वाइडबडी जहाजले यसै साता ती गन्तव्यको उडान भर्ने तयारी गरेको हो । निगमका अपरेशन विभाग प्रमुख दिपु जहार्चनले लण्डन, फ्राङ्कफर्ट र क्यानाडा उडानको प्रारम्भिक तयारी भइरहेको राससलाई जानकारी दिनुभयो ।